An-tapitrisany Ireo Noverezin-jo Tsy Afaka Nifidy Tao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2014 20:39 GMT
Na dia eo aza ireo fihetsiketseham-panoherana ny governemanta sy ny fanentanana tsy hifidy nataon'ny mpanohitra, afaka nanatontosa fifidianana milamina ihany i Thailandy. Saingy maro ireo Thailandey no tsy afaka nifidy na voasakana tsy afaka namonjy biraom-pifidianana akaiky noho ireo fihetsiketsehana. Araka ny filazan'ireo mpikarakara ny fifidianana, nahatontosa fifidianana ny 89,2 %-n'ny biraom-pifidianana, na biraom-pifidianana 83.813 tamin'ireo 93.532.
Tao anatin'ny adilahy politika tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firenena no notontosaina ny fifidianana. Midina an-dalambe ao Bangkok, renivohi-pirenena ireo mpanao fihetsiketsehana, volana maromaro sahady izay ary mitaky ny fametra-pialàn'ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra. Voampanga [fr] ho manaraka ny baikon'ny zokiny lahy, Praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra i Yingluck.
Marobe ireo mpifidy voasakana hifidy no nandeha nametraka fitoriana tany amin'ny polisy. Ho an'i Bangkok fotsiny, biraom-pifidianana 488 amin'ireo 7.000 eo ho eo no nikatona noho ireo fihetsiketsehana.
Noho ny fahamaroan'ireo biraom-pifidianana voasakana (nikatona), mbola tsy navoaka ny valim-pifidianana ary mety mbola miandry herinandro maromaro mandra-pikarakarana fifidianana ampahany.
Nanazava i Saksith Saiyasombu fa mbola afaka handatsa-bato amin'ny fotoana manaraka ireo mpifidy noverezin-jo:
Ilaina ny diezy Twitter #ThaiVote2014 sy #vote2014 mba hanarahana ny fizotry ny fifidianana.